အချိန်​အကန့်​အသတ်​နဲ့​ပေးတဲ့ ၁၀ % အပို​​ဘောနပ်​စ်​. ထရိတ်​ပြုလုပ်​နိုင်​တဲ့ margin ​ဘောနပ်​စ်​​​နော်​!
သတင်း​ကောင်း​ဟေ့! ဒီတစ်​ပတ်​ထဲမှာပဲ (ဒီဇင်​ဘာ ၄ရက် မှ ၈ရက် အထိ) သင်​ ၁၀ % အပိုဆု ​ငွေသွင်းရင်​ ရနိုင်​တယ်​​နော်​!
၁. သင့်အကောင့်ထဲသို့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နှင့်အထက် ရင်းနှီးငွေထည့်သွင်းလိုက်ပါ
၂. bonus10@fbs.com ကို သင့်အကောင့် နံပါတ် နဲ့ အီးမေးလ် ပို့လိုက်ပါ
၃. ပြီးရင်​ သင်​​ဆေး​နေလိုက်​ယုံပဲ. ​ဘောနပ်​စ်​က သင့်​အ​ကောင့်​ထဲ တခါတည်း ​ရောက်​ပြီးသား ဖြစ်​သွားမှာပါ.
ထိုဘောနပ်စ်ကို အသုံးပြုပြီး ထရိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
ပရိုမိုးရှင်းက ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၄ရက် မှ ၈ရက် အထိပဲနော်. ဘယ်အကောင့်မဆို အကျုံးဝင်ပါတယ်
တစ်ယောက်ကို ဘောနပ်စ်တစ်ခု ပဲရမှာပါ
ထိုဘောနပ်စ်ကို ငွေထုတ်တဲ့အခါ သို့မဟုတ် တစ်လလောက်ကြာပြီးရင် ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ
စည်းကမ်းချိုး​ဖောက်​ပြီး သံသယဝင်​စရာ​ကောင်းတဲ့ အပြုအမူမျိုးရှိခဲ့လျင်​ကုမ္ပဏီက ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ စည်းကမ်းသတ်​မှတ်​ချက်​များကို ​ပြောင်းလဲခွင့်​ရှိပါတယ်​. ကုမ္ပဏီဟာ ​ဘောနပ်​စ်​ ရပိုင်​ခွင့်​ကိုရုတ်​သိမ်းနိုင်​ပါတယ်​. ဒါ့အပြင်​ ရရှိထားတဲ့ အကျိုးအမြတ်​​တွေကိုလည်း ရုတ်​သိမ်းခွင့်​ရှိပါတယ်​. ​ဘောနပ်​စ်​တန်​​ကြေးအများဆုံးက ​ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပါ